08:56:36 am 16-Sep-2020
काठमाडौं-बसेको नेपाली भाषा शिक्षा समाजको तदर्थ समितिको बैठकले संयोजकमा प्रा.डा. शर्वराज आचार्यलाई चयन गरेको छ । सहसंयोजकमा हिमलाल पुरी, सचिवमा डा. दुर्गाप्रसाद दाहाल, सहसचिवमा भारती अधिकारी र कोषाध्यक्षमा दिनेश घिमिरे र सदस्यहरुमा उद्धव कुमार शर्मा, रामकुमार राई, इन्द्रकुमारी देवकोटा, डा। नारायणप्रसाद पन्थ, डा। हर्कबहादुर शाही, डा। केशव भुसाल, दीपकबाबु निरौला र अर्जुन दाहाल रहेका छन् ।